Gary Neville oo si cad u sheegay hal sabab oo aysan Chelsea kal ciyaareedkan ugu guuleysan karin Premier League – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Inter Milan iyo Juventus ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey
Kooxaha Liverpool iyo Man United oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Anfield… +SAWIRRO
Gary Neville oo si cad u sheegay hal sabab oo aysan Chelsea kal ciyaareedkan ugu guuleysan karin Premier League
Dajiye September 15, 2020
(England) 15 Sebt 2020. Chelsea ayaa guul ay u qalantay ka soo qaadatay kooxda Brighton, kulankeeda ugu horeeyay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan 2020-21, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3.
Kaddib guushan iyo saxiixyadii waa weynaa ay suuqan xagaaga ka sameysay Blue, taageerayaasha kooxda ayaa ku jirta rajo ah inay u tartami karaan hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Laakiin halyeeyga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa sheegay haddii ay Chelsea dooneyso inay u tartanto hanashada horyaalka Premier League, ay tahay in gabi ahaanba ay iska fasaxdo goolhayaha reer Spain ee Kepa Arrizabalaga.
Kepa Arrizabalaga ayaa noqday goolhayaha ugu qaalisan adduunka kaddib markii uu Chelsea kaga soo biiray kooxda Athletic Bilbao aduun dhan 80 million euros sanadkii 2018, laakiin wuxuu ku guuldarreystay inuu soo bandhigo wax qabadkii laga sugayay.
Wuxuu u horseeday kooxda Brighton inay dhaliso goolka barbardhaca, kaddib markii si fudud shabaqiiso loo gaaray ciyaartii xalay, waxaana ka dhashay kubad uu ka soo laaday Leandro Trossard meel ka baxsan xerada ganaaxa, taasoo ka dhigtay in ciyaarta ay noqoto 1-1, kahor inta uusan gool qurux badan u dhalinin Blues xiddigeeda Reece James.
Haddaba Gary Neville, oo falanqeeye u ah Sky Sports, ayaa gabi ahaanba ku qancin wax qabadka goolhayaha reer Spain Kepa Arrizabalaga ee kooxda Chelsea, wuxuuna yiri:
“Kuma guuleysan doonto Chelsea horyaalka inta ay heysato goolhaaye u ogolaanaya inuu ka dhasho gool kaddib kubad laga soo tuuray meel ka baxsan diilinta ganaaxa, oo aan xakameyn karin aagga isla markaana shabaqiisa lagu ruxayo kubaddo banaanka ah, tani ma dhici doonto”.
Gary Neville oo aaminsan in saxiixa goolhaye cusubi ay tahahay waxa laga doonayo kooxda Chelsea ayaa wuxuu yiri:
“Dhowr sano ka hor, Liverpool ma aheyn koox u dagaalanta inay ku guuleysato tartamada, sababatoo ma aysan heysanin goolhaye ku hogaamin kara booskan”.
“Wuu fahamsan yahay waxa uu u baahan yahay, ma jecla goolhayaha, wuxuu doonayaa inuu baxo, wuxuuna doonayaa inuu la soo saxiixdo goolhaye cusub. Frank wuxuu ogaaday inuu booskiisa waayi karo haddii uusan ku guuleysan horyaalka labo ama seddex sano sababtoo ah wuxuu qarash gareeyay 200 million pounds”.
“Pep wuu sameeyay, Klopp ayaa sameeyay, Alex Ferguson ayaana sameeyay, si uu ugu qalmo booskiisa, tababare walba waa inuu noqdaa mid adag”.
Barcelona oo qorsheyneysa inay sara u qaado qiimaha xiddig ay si aad ah u dooneyso
Muxuu ku jawaabay tababare Lampard mar wax laga weydiiyay haddii ay kooxdiisa Chelsea u baahan tahay saxiixa goolhaaye cusub??